Ny adihevitra: 'Mahasoa anao ve ny DMT sa tsia?' Nahita tampoka io lehilahy io tamin'ny alalan'ny simulation
Filed in MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 13 August 2018	• 2 Comments
Na dia ao amin'ny lahatsoratra teo aloha ny amin'ny DMT, ny fananana voarakitra ao faka-tahaka extractions toy ny ayahuasca sy iboga, no nilaza fa miray feo ny transceiver Saturne-miasa amin'ny fehezan-dalàna, dia mba seep famantarana hiseho avy amin'ny olona izay Ny tena zava-baovao dia manomboka mahita amin'ny fampiasana DMT. [...]
Afaka manara-maso ny vokatr'ity simulation ity ve isika?
Filed in NY SIMULATION, MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 8 August 2018	• 9 Comments
Na dia manana mbola kely taona dia efa tsy maintsy ho tsy mino an'Andriamanitra be fitiavana, indrindra fa nitodika hatahotra, dia mahaliana ahy ny fomba ny olona an'arivony tapitrisa no variana amin'ny rafitra ny finoany ary aoka hamaritra ny fiainany manontolo amin'ny alalan'ny. Ankehitriny dia tsy finoana an'Andriamanitra irery ihany, Allah, Jesus, [...]
Ny vokatry ny ayahuasca DMT sy ny asan'ny pineal gland
Filed in MIND & SOUL CONTROL	by Martin Vrijland	amin'ny 6 August 2018	• 5 Comments
Manolo-kevitra matetika aho amin'ny fanandramana singa DMT toy ny endrika ayahuasca na solontenan'ny DMT hafa. Tahaka izany, io trondro io dia mampihetsi-po ny fihinan'ny jabora, mahatonga ny traikefa akaiky amin'ny fahafatesana sy ny fanandramana amin'ny vatana rehetra. Ankehitriny dia efa nanandrana zava-mahadomelina aho [...]
Filed in NY SIMULATION, MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 August 2018	• 6 Comments
Indrindra fa hatramin'ny fiolahana ireo amin'ny Kristianina na Silamo fijery matetika aho mahazo ny fanontaniana: Raha ny hevitrao ny namorona izao rehetra izao dia ny simulation Luciferian, izay namorona avy eo i Losifera sy ny momba ireo demonia, djinns, archons? Te-hanazava amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity aho ary koa [...]
Manaporofo ve ny teknôlôjika momba ny rahona ao amin'ny Google ho an'ny Aurgmented Reality (AR) fa ny universe dia simulation?
Filed in NY SIMULATION, MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 August 2018	• 4 Comments
Taorian'ny vitsivitsy no nanoratra lahatsoratra momba ny foto-kevitra izay dia izaho sy ianao eo amin'ny zava-misy amin'ny fiainana virtoaly, voaporofo amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ny maro fa ny mpamaky dia tena tohina. Araka ny efa nanambara fa ny fitsipiky ny "atsangana hitondra fisafotofotoana" ny toe-javatra izay ilaina Einstein Ort ny teoria, ary manimba ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny hazavana (toy ny fizika sisin ara-batana), [...]
Mihamaro hatrany ny olona manomboka mahita fa miaina anaty simulation isika: izany no antony
Filed in NY SIMULATION, MIND & SOUL CONTROL	by Martin Vrijland	amin'ny 3 August 2018	• 9 Comments
Rizwan ( "Riz") dia mahomby Virk mpandraharaha, mpampiasa vola, bestselling mpanoratra, mpisava lalana ao amin'ny lahatsary sy ny lalao orinasa mpamokatra sarimihetsika mahaleotena. Amin'ny alalan'ny ny zavatra niainany tao amin'ny lahatsary an-tserasera lalao sy ny fianarana dia ahitana atsangana hitondra Fizika sy ny hetsika ara-pivavahana, dia tonga teo amin'ny famaranana fa tena inoana fa amin'ny zava-misy amin'ny virtoaly Multiplayer lalao velona. [...]
Inona no azontsika atao mba hamahana ny olantsika? Hetsika goavana lavitra!
Filed in NY SIMULATION, MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 1 August 2018	• 4 Comments
Ireo lahatsary etsy ambany dia manome fahatakarana kely momba ny foto-kevitry ny fifangaroana. Ny fandikan-teny Anglisy an'io dia ny fiparitaham-bato. Raha mijery ny horonantsary etsy ambany ianao, dia mety hahatsapa kely momba ny dikan'io teny io. Ny fepetra fametrahana fetra ilaina dia ilaina mba hahatakatra, satria araka ny hevitro dia mitantara betsaka momba ny fisiantsika izy io. Ao amin'ny lahatsoratro teo aloha dia manana [...]
Filed in NY SIMULATION, MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 Jolay 2018	• 22 Comments
Fantatrao ve fa ny zavatra rehetra hitanao dia vao mainka mitombo rehefa voamarina izany? Ity dia maneho ny fanandramana tranainy efa ho zato taona antsoina hoe dingana indroa (fanokafana indroa). Ireo mpitsikera fizahan-tany manerana izao tontolo izao no nanao an'io fanandramana io an-jatony, satria nitarika ho amin'ny tsy finoana sy fahatokisana lehibe tokoa izany. Hita izany [...]
Sarin'ny Mpaminany Muhammad (fiadanana eo aminy) sy ny fifaninanana sarimihetsika nataon'i Geert Wilders
Filed in MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 Jolay 2018	• 12 Comments
Ary namely ahy tamin'ny lahateny tafiditra amin'ny Sheikh Imran Hosein, tiako mba hihaino ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny tantara sy ny zava-mitranga momba ny faminaniana Islamika izay efa ho silamo na oviana na oviana manonona ny anaran 'ny mpaminany Muhammad, ary raha manao izany dia hametraka fa fehezanteny iray manontolo ny. [...]
Jesosy no mpamonjy ny rehetra izay manolo-tena ho Azy! Sa ny finoana silamo no marina?
Filed in MIND & SOUL CONTROL, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 Jolay 2018	• 48 Comments
Androany aho dia nandefa lahatsoratra iray momba ny traumatizing ny ankizy sy ny zaza izay niasa tamin'ny tsy misy fanafody fanadontoana mandra-tsara ho any an-dimam-polo 80 satria ny rafi-pitatitra dia tsy ho nitranga. Manasa anao aho hamaky ity lahatsoratra ity alohan'ny hanohizanao eto. Raha ny marina, mikasika ny trauma. Ny trauma voalohany [...]
Total visits: 14.494.565
Zonnetje op Fantaro ny tantara mba hahalala ny fandaharam-potoana UNN 2030
Zandi Eyes op Fantaro ny tantara mba hahalala ny fandaharam-potoana UNN 2030
Camera 2 op Inona no marina momba ny famonoana an'i Derk Wiersum ary inona no dikan'ny hoe "vavolombelona ny satroboninahitra"?
ZalmInBlik op Any amin'ny sehatry ny polisy, maniry ny fandraràn'ny polisy sy ny mpamatsy "fanampiana" ianao
Camera 2 op Any amin'ny sehatry ny polisy, maniry ny fandraràn'ny polisy sy ny mpamatsy "fanampiana" ianao